Cherry Jones waxay kubiirtay jilayaasha taxanaha "Shanta maalmood ee xuska" | Waxaan ka socdaa mac
Cherry Jones wuxuu ku biirayaa jilayaasha taxanaha "Shanta maalmood ee xuska"
Taxanaha Apple TV + ayaa sii kordhaya. Kuwii horeyba ugu jiray boodhka ayaa sii wadaya kordhinta xilliyada iyo kuwa soo socda oo ku sii kordhaya jilayaasha jilayaasha iyo jilayaasha iyaga ka tirsan. Sidoo kale kama hadleyno wax jilaa / atariisho ah. Waxaan ka hadleynaa xirfadlayaal waaweyn oo muhiim ah kuwaas oo siin doona taxanaha joogitaan weyn iyo tayo sare leh. Qalinka ugu biirista Apple TV + waxaad noqotay kuwa layaableh Cherry Jones "Shanta Maalmood ee Xusuusta"
Abaalmarinta Emmy iyo Tony, Cherry Jones, ayaa ku soo biiray filimka soo socda ee Apple TV + riwaayad taxane ah "Shan Maalmood oo Xus ah." Waxay la ciyaari doontaa Susan Mulderick, agaasimaha kalkaalinta caafimaadka ee Isbitaalka Memorial iyo guddoomiyaha guddiga u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, sida laga soo xigtay The Hollywood Reporter. Wixii ka dambeeyay duufaantii Katrina, waxay noqotay taliyaha isbitaalka loo qoondeeyay dhacdada.
Jones, ayaa caan ku ah shaqadeeda Isagoo difaacaya Yacquub, "Isku xigxiga" iyo "Sheekadii Addoonta", wuxuu ku biirayaa xubnaha jilaya ee jira Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr. iyo Adepero Oduye. John Ridley iyo Carlton Cuse ayaa la qabsanaya isla markaana fulinaya taxanaha taxanaha ah. Intaa waxaa dheer, labaduba waxay hagi doonaan dhacdooyinka mararka qaarkood. Fink, qoraaga buugga, wuxuu u adeegi doonaa soo-saare taxanaha.
"Shan Maalmood Xuska" ayaa sheegaya wixii ka dambeeyay duufaantii Katrina marka laga eego cusbitaalka New Orleans Memorial Hospital. Iyada oo ku saleysan sheeko ay qortay Sheri Fink oo ku guuleysatay abaalmarinta Pulitzer, taxanahan ayaa si qoto dheer u galaya dhibaatooyinka anshaxa iyo anshaxa ee jilayaasha lagu qasbay inta lagu jiro dhibaatada.
Talaabo talaabo, Apple TV + wuxuu ku shaqeeyaa si wanaagsan oo maalin walba balaaran oo balaaran oo taxane ah, dokumentiyo iyo filimo ah. Wax badan ayaa haray laakiin waddadu waa gogol iyo dabcan tayo ahaan ma noqon doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Cherry Jones wuxuu ku biirayaa jilayaasha taxanaha "Shanta maalmood ee xuska"
Apple wuxuu ceyrinayaa kooxdii ugu dambeysay ee xayeysiinta ee faallooyinka khaldan